अस्पताल र औषधी नपाएर कोही मर्छ भने त्यो मृ’त्यु होइन, ह’त्या हो – Sandesh Press
May 27, 2021 427
बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी अस्पतालका विज्ञप्ति धमाधम आइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरू भन्दैछन्, ‘हाम्रो हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स भइसक्यो’ ।
डव्ल्यूएचओले अघिल्लै वर्ष भनेको थियो, ‘सन् २०२० भन्दा २०२१ झन् कठिन हुनसक्छ’। संसदमा, हिमालमा ठोक्किएको चिसो हावाको बयान गर्दैमा डव्ल्यूएचओको कुरा सुन्ने फुर्सद भएन ।
महामारीको एक वर्ष, नारा जुलुस र शक्ति प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू अहिले कुर्सीका लागि लड्दैछन् । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । जसलाई भोट दिएर पठायौं, दिनरात नभनि पसिना बगाएको पैसाले तलब खुवाएका छौं, ।
उनीहरुमा थोरै पनि मानवीयता देखिएन । आफ्ना नागरिक बचाउन दिनरात खट्नुपर्नेहरू कहाँ, कुन् सरकार बन्ला र आफूले पद पाउँछु कि पाउदिनँ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।अहिले देशका अधिकांश ब्यूटी पार्लर बन्द छन् । घरबाहिर निस्कन पनि मुस्किल छ । तर शरीरमा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस्, ब्यूटीसियन नीरु श्रेष्ठले घरमै अनावश्यक रौं हटाउने केही उपाय दिएकी छिन् । उनको सुझाव यस्तो छः
Prevकाठमाडौँका तीन स्थानमा बर्डफ्लु सङ्क्रमण
Nextघरबेटीले कोठा खालि गर भनेपछि यी महिलाले आफ्नै जग्गामा बनाइदिने भईन घर ! सम्मान स्वरूप शेयर गर्नुहाेस